विकास पर्खेर बसेको गाउँ ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
विकास पर्खेर बसेको गाउँ !
बिपल रसाइली (सिक्किम )
‘बाह्र छोरा तेह्र नाति बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ यो युक्तिसँग ठ्याक्क मिल्दाजुल्दा पात्राहरू हुन् यी दुइ बृद्धहरू। उमेरले डाँड़ाको घाम। अनुहारमा निराशा अनि कुण्ठा। साहराविहीन जीवन। खाना र लाउनका लागि पुगिसरी छैन। हो, यसरी नै बित्दैछ सत्तरी वर्षीय मनबहादुर तामाङ र उनीको श्रीमतीको जीवन। दक्षिण सिक्किमको मल्लीस्थित पाँचघरे गाउँमा यी बृद्धहरूको बसाई छ। उमेर हुँदा पाखुरी बजाएर बारीखेती गर्ने दुइ ज्यान अहिले कमजोर भइसकेका छन्। बस्तीमा बाँझो खेत, सुक्खा जमिनमा उनीहरू आफ्नो सास अड़काएर बसेका छन्। रात काट्न दुइ कोठाको घर छ। अवस्था दयनीय छ। स्यार-सुसार छैन। माटोले लेपेका भित्ताहरू भुइँमा खसिसकेको छ। आकाशको पानीले काठपाठ मक्किसकेको छ। छानाहरू हावाले उड़ाइसकेको छ। कुनै पनि बेला ठूलो हुरी चले घरै उड़ाएर लाने अवस्थामा छ।
पत्रकार अन्जिता राजालिम यी बृद्ध दम्पतिबारे स्थानियहरूबाट खबर पाएपछि उनीहरूको गाउँमा नै पुगिन्। एक जोड़ी बाख्राले आँगनमा नै घाँस खाँदै थियो। मनबहादुर तामाङ धुलाम्मे भुइँमा घाम तापिरहेका थिए। श्रीमती पनि छेउमा नै थिइन्। उनीहरूले आफ्नो कथा सुनाउन थाले।
तामाङ दम्पतीको साथमा पत्रकार अन्जिता राजालिम !
“मेरो यति घर बनिए कति धन्य हुने थिएँ” सुस्केरा हाल्दै बृद्ध सुनाउँछन्। यी तामाङ बूढाले झाक्कलझुक्कुल बृद्ध भत्ता पाउने गरेको बताउँछन्।